Poker Jet: Texas Holdem and Omaha 31.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 31.8 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ကာစီႏို Poker Jet: Texas Holdem and Omaha
Poker Jet: Texas Holdem and Omaha ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စွန့်စားမှုနှင့် adrenaline နှင့်ပြည့်စုံ Poker ၏ Poker ဂျက်-ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲမှကြိုဆိုပါ၏! တက္ကဆက်ပြည်နယ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှသုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာ၏အွန်လိုင်း '' em သို့မဟုတ် Omaha ဖဲချပ်ဝေ Hold Play!
Poker ဂျက်အတွက်, သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်:
* အဆိုပါဂန္တက္ကဆက် Hold '' em ငွေသားဂိမ်း
ဆုလာဘ်နှင့်အတူ * Daily သတင်းစာ Quest များ
မည်သည့်အရသာနှင့်ကိုက်ညီရန် * ပြိုင်ပွဲများ
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ * Play စဖဲချပ်ဝေ
* slot နှင့်အခြား Mini-ဂိမ်း
အကောင်းဆုံးကိုကစားသမားထိပ်မြင့်တက်နိုင်သောနေရာ * တစ်ဦးကဦးဆောင်သူ
အထက်တန်းစားလောင်းကစားရုံလေထုအခမဲ့ဖဲချပ်ကစားများနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chatting အတွက်အချိန်ဖြုန်း! တစ်ဦး WSOP လိုလားသူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်နှင့် Poker ဂျက်သင်္ဘောမှကြိုဆိုပါ၏! အဆိုပါဖဲချပ်ဝေပါတီစတင်!
·အဆိုပါဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့; သို့သော် In-app ကိုဝယ်ယူမှုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာနှင့် In-ဂိမ်းငွေကြေးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ in-app ဝယ်ယူမှု $ 0.99 ကနေ $ 99.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာအထိ။
end-user License Agreement ကို:
Poker Jet: Texas Holdem and Omaha အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Poker Jet: Texas Holdem and Omaha အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Poker Jet: Texas Holdem and Omaha အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Poker Jet: Texas Holdem and Omaha အား အခ်က္ျပပါ
my-lovely-android စတိုး22.69k
Poker Jet: Texas Holdem and Omaha ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Poker Jet: Texas Holdem and Omaha အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 31.8
ထုတ်လုပ်သူ Social Quantum Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://privacy.socialquantum.com
App Name: Poker Jet: Texas Holdem and Omaha
Release date: 2019-07-12 13:58:50
လက်မှတ် SHA1: 72:B2:75:28:CA:90:80:C4:12:86:A2:D0:FE:6D:73:88:81:A9:11:D7
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Michael Varamashvili
အဖွဲ့အစည်း (O): Social Quantum
Poker Jet: Texas Holdem and Omaha APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ